သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာရော အဆိုပိုင်းမှာပါ ကိုယ်မလုပ်ဖူးတာ မရှိရဘူးဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ သီချင်းတွေ - Yangon Media Group
သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာရော အဆိုပိုင်းမှာပါ ကိုယ်မလုပ်ဖူးတာ မရှိရဘူးဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ သီချင်းတွေ
ဒုတိယမြောက်တစ်ကိုယ် တော်အခွေမှာ ကိုယ်မဆိုဖူးသေးတဲ့ Rock သီချင်းတွေ သီဆိုထား တယ်ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင်/အဆို တော်စိုးနန္ဒာကျော်နှင့်တွေ့ဆုံခိုက် မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ရာ . . .။
မေး- အနုပညာအလုပ်တွေ ပြန်လုပ်နေပြီဆိုတော့ လက်ရှိမှာ ဘာ တွေလုပ်ဖြစ်နေလဲ။
ဖြေ- အခုလက်ရှိကတော့ ကိုမင်းထက်လုပ်နေတဲ့ ကမ်းခြေဘောလုံးပွဲလေးမှာ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အပိုင်းလေးကနေပါဝင်ပြီးတော့ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားမှုကတော့ ညီမရဲ့ ဒုတိယတစ်ကိုယ်တော်အခွေ လေး ထွက်နိုင်ဖို့အတွက် ကြိုးစား နေပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတိုလေး တွေလည်း ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။ နယ် မှာလည်း ပွဲလေးတွေမှာ သီချင်း တွေ လိုက်ဆိုနေပါတယ်။
မေး- ဒုတိယတစ်ကိုယ်တော် အခွေမှာ ကိုယ်မဆိုဖူးတဲ့ သီချင်းပုံစံတွေရောပါလား။
ဖြေ- သီချင်းပုံစံလေးတွေက တော့ Rock ဆန်တဲ့သီချင်းပုံစံလေး တွေပါမယ်။ နောက်တခြား ဂီတပုံစံလေးတွေလည်းပါမယ်။ Rock သီချင်းပုံစံမျိုးလေးတွေကျတော့ကိုယ်လည်း တစ်ခါမှမဆိုဖူးဘူး။ တခြားအနုပညာရှင်တွေကလည်းလုပ်ဖို့ပြောတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဆိုချင်နေတာကြောင့် ဆို ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ စိန်ခေါ်မှုလည်းများတယ်။ျွသခု သီချင်းဆိုတာ အသံပါရမီကောင်းတဲ့ လူမျိုးတွေ ဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကအသံလည်း အဲဒီလောက် မကောင်းပါဘူး။ အဆိုရှင် အစစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဝါသနာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအ ခွေထွက်ပြီးတဲ့အချိန်ကတည်းက ကိုယ်အများကြီးလည်း ကြိုးစားဖို့ လိုသေးတယ်။ Rock သီချင်းကိုဆို ဖြစ်တာကလည်း သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာရော အဆိုပိုင်းမှာပါ ကိုယ်မလုပ်ဖူးတာမရှိရဘူး။ ဂီတအစုံကို ဆိုဖူးရမယ်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းလည်း အဲဒီလိုဖြစ်ချင်တာကြောင့်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
မေး- သီချင်းတွေကို အခွေအရင် မထုတ်ဘဲ အွန်လိုင်းပေါ် အရင်တင်မယ်ဆိုတာကရော ဘာကြောင့်လဲ။
ဖြေ- ဘာကြောင့် အွန်လိုင်းပေါ် အရင်တင်ဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ အွန်လိုင်းပေါ်တင်တာက ပရိသတ်တွေလည်း ပိုပြီးတော့ အသိများမယ်။ ကိုယ့်အတွက်လည်း အမှတ်တရ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ညီမအနုပညာ လောကထဲကို စပြီးဝင်တဲ့အချိန်ကတည်းက အနုပညာအလုပ်တွေ ကို အကျိုးအမြတ်ကို မျှော်ပြီးလုပ်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ ညီမတတ်နိုင် တာကို အကောင်းဆုံးလုပ်ချင်တယ်။ အကျိုးအမြတ်ကို မမျှော်လင့်ထားတာကြောင့် ဘဝရဲ့ အမှတ်တရအနေနဲ့ပဲ အွန်လိုင်းပေါ် တင်ဖြစ်မှာပါ။
မေး- ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကရော ဘယ်တော့လောက် စရိုက်ဖြစ်မလဲ။
ဖြေ- ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေက တော့ ကိုမင်းထက်နဲ့ အရင်ဆုံးတွဲရိုက်ဖို့ရှိမယ်။ ရိုက်ဖြစ်မှာက တော့ သင်္ကြန်အပြီးလောက်မှ ရိုက်ဖြစ်မှာပါ။
မေး- ကြားထဲမှာလည်း အနုပညာ အလုပ်တွေကို နားလိုက်တယ်နော်။
ဖြေ- ဟုတ်ပါတယ်။ ကြားထဲမှာ အနုပညာအလုပ်တွေ နားလိုက် တာကြာသွားပါတယ်။ အခုမှ ပြန်စပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပါ။ အခုက တော့ အခွေထုတ်ဖို့ပြန်လုပ်နေပြီ။ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရိုက်ဖို့လည်းရှိပါတယ်။
'ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တစ်ကား ရုံတင်ဖို့ပြောရတာက ဇာတ်ကားတစ်ကား ရိုက်တာထက် ပိုပြီးတော့ ပင်ပန်းတယ??
အမေရိကန်နိုင်ငံက ဗဟိုအမေရိက သုံးနိုင်ငံကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေမှုများ ရပ်ဆိုင်း
မာနေးကို ဘောလုံးသမားထက် ကျောင်းဆရာဖြစ်ရန် မိဘများ အလိုရှိခဲ့
တပ်မတော်အပေါ် ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းအောင်၊ ထိခိုက်နစ်နာအောင်၊ ပြည်သူလူထုနှင့် နိုင်ငံတကာက အထင်အ??
ပွဲပျက်ခဲ့ရသည့် ကိုပါလီဘာတေးဒိုး ဗိုလ်လုပွဲ ဒုတိယအကျော့ကို ဗျူနိုအေရိစ်နှင့် မိုင်ပေါင်း
တက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်များတွင် နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်သော ဟောပြောဆွေးနွေး ပွဲများ ပြုလုပ်ခွ??
ပေါင် ၁၄၅ သန်းဖြင့် ဘာစီလိုနာ အသင်းသို့ ကော်တင်ဟို အပြီးသတ်ပြောင်းရွှေ့